Sidee ciidanka Soomaaliya u badbaadiyeen diyaaraddii laga soo afduubtay Jarmalka (Qaybta 1-aad)? - Muraayad
Sidee ciidanka Soomaaliya u badbaadiyeen diyaaraddii laga soo afduubtay Jarmalka (Qaybta 1-aad)?
Bishii October ee sanadkii 1977-kii waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho laga fuliyay howlgal lagu badbaadiyay rakaabka diyaarad ay soo afduubteen koox argagixiso ah.
Akhristeyaal ku xidhan Maanfur.com ayaa codsiyo dhowr ah noo soo gudbiyay iyagoo dalbanaya inaan si faahfaahsan ugu sheegno qaabkii uu u dhacay howlgalkaas iyo ciddii fulisay.
Waxaan xog kasoo diyaarinnay warbixin uu isla maalintaas dhacdada oo dhammeystiran ka qoray wargeyska New York Times, oo xilligaas ilaa hadda ka mid ah warbaahinta ugu afka dheer caalamka.
Howlgalkan taariikhiga ah wuxuu dhacay subax Talaado ah, oo ay taariikhdu ku beegneyd 18 October, 1977.
Iyadoo uu waqti 90 daqiiqo ah ka dhiman yahay xasuuq ay suuragal ahayd in loo geysto rakaabka diyaarad lasoo afduubtay ayey ciidamo kumaandoos ah oo ka socday Jarmarkii Galbeed oo gacan ka helaya militariga Soomaaliya weerar ku qaadeen koox argagixiso ah oo diyaaraddaas ku heystay garoonka maanta loo yaqaanno Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Halkaas waxaa lagu soo afjaray afduubkii diyaaradda ee socday 5 maalmood, ilaa 6,000 oo meylna ay ku jartay diyaaradda intii meelaha kala duwan marba mid la geynayay.
Isla goobtaas ayaa lagu wada dilay afar nin oo afduubka mas’uul ka ahaa waxaana la badbaadiyay rakaabkii diyaaradda oo ahaa 86 ruux, iyagoo wada nabad qaba.
Sida uu u dhacay afduubka iyo sababta
Afar nin ayaa la wareegay diyaaradda Lufthansa duullimaadkeedii lambarkiisu ahaa 181, maalin Khamiis ah, hal saac kaddib markii ay ka duushay Jasiiradda ku taalla Badda Mediterranean-ka ee Majorca, iyadoo kusii jeedday magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka.
Diyaaradda nooceedu wuxuu ahaa Boeing 737.
Ragga argagixisada ah ayaa diyaaradda ku khasbay inay socoto 6,000 oo meyl, waxayna sii marsiiyeen Roma, Qubrus, Baxreyn, Dubai, Cadan, ugu dambeyntiina waxay ka dajiyeen Muqdisho.
Waxay dileen duulihii waday, dhowr jeerna waxay waqti u qabteen in ay qarxin doonaan diyaaradda oo ar rakaabka saaran yihiin haddii loo fulin waayo dalab ay u gudbiyeen dowladaha Jarmalka Galbeed iyo Turkiga oo ku aaddanaa in loo sii daayo 11 xubnood oo ka tirsanaa kooxdii argagixisadaha ahayd ee magaceedu ahaa Baader Meinhof iyo labo Falastiiniyiin ah oo ku xirnaa dalka Turkiga.
Qaabkii uu howlgalka u dhacay
Howlgalkan wuxuu dhacay hal maalin kaddib markii uu aad u xoogeystay cadaadista la saarayay dowladda Jarmalka iyo walaaca uu caalamka ka qabay xaaladda rakaabka 86 qof ahaa iyo 4 ruux oo ahaa shaqaalaha diyaaradda.
Magaalada Rome, Pope Paul VI ayaa yidhi: “Haddii ay wax tareyso, nafteenna ayaan u huri lahayn in la xoreeyo rakaabkaas.”
Dowladdii Jarmalka ee uu hoggaaminayay Helmut Schmidt ayaa howlgalkaas mirodhalka ahaa ku tilmaantay guul weyn maadaama ay ku gacan seyrtay dalabkii afduubeyaasha.
Waxaa Muqdisho loo soo diray koox kumaandoos ah oo tababar gaar ah leh, kuwaasoo la diyaariyay kaddib markii uu xasuuq ka dhacay magaalada Munich sanadkii 1972.
Guud ahaan howlgakaas wuxuu socday muddo shan daqiiqo ah sida lagu warramay.
Kumaandooska Jarmalka oo ay taageerayaan ciidanka Soomaalida ayaa qarxiyay albaabka diyaaradda, si deg deg ah ayeyna gudaha u galeen.
Waxaa kale oo la sheegay in ciidan khaas ah oo ka socday Israa’iil ay howlgalkaas qeyb ka ahaayeen.
Labo askari ayaa ku dhaawacmay weerarka. Nin ka mid ahaa howl wadeennadii qalabka isgaarsiinta ee kus usgnaa Israa’iil, oo laga wareystay idaacad ku taallay Jarmalka Galbeed ayaa sheegay in uu codka qalabkii lagu xiriirayay ka maqlay in mid ka mid ah shaqaalihii diyaaradda uu gaaray dhaawac fudud laakiin dhammaan rakaabkii ay ka dageen iyagoo wada badqaba.
Dowladdii Jarmalka maamuleysay xilligaas ayaa sheegtay in isla maalintaas ay Muqdisho geystay lixdan kumaandoos ah oo howlgalkaas ka qeyb qaadatay.
Maxay tahay sababta uu howlgalka diyaaradda uga dhacay Muqdisho?
Soomaaliya ayaa sabab u ahayd in la badbaadiyo dadkii ku afduubnaa diyaaraddaas, sida ay sheegtay dowladda Jarmalka. Laakiin sidee ayey Soomaaliya ku yeelatay amaantaas?
Qeybta 2-aad ayaan kusoo bandhigi doonnaa hadduu Alle idmo.
Previous article8 xuduud oo sida ugu adag loo ilaaliyo adduunka oo dhan
Next article9 talo oo kaa badbaadinaysa dhibaatada Internet-ka